रिफरल सेन्टर नै बिरामी रेफर गर्दै
धरानः दक्षिण एशियाकै उत्कृष्टमध्येको एक मानिएको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीलाई विभिन्न बहाना देखाएर चिकित्सकहरूले निजी अस्पतालमा रेफर गर्न थालेका छन् ।
पूवैकै रिफरल सेन्टरको रूपमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान पछिल्लो समय आन्तरिक बिचौलियाका कारण रेफर सेन्टर बन्दै गएको छ । कमिसनको लोभमा अस्पतालका डाक्टरदेखि सहयोगीसम्मले निजी संस्थामा बिरामी लैजान सेटिङ गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रतिष्ठानभित्र कमिसनको चलखेल र अनियमितता हुने गरेको पुष्टि यसअघि नै निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको रकमसहित पक्राउ पर्नुले पुष्टि गरेको छ ।
पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दास, पूर्व रजिष्टारलगायत कारोबारका ठेकेदारहरू सहितलाई अख्तियारले पक्राउ गर्नुले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो समय कमिसनको खेलमा बिरामीलाई अनावश्यक फुड सप्लिमेन्ट्री खरीद गर्न लगाएको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि आएका बिरामीलाई चिकित्सकहरूले ढिलो गरी जाँच गर्ने, सम्बन्धित विभागमा नपठाएर आफैँ अन्य अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउने गरेका छन् । एकातिर उपचार गर्न नसक्ने भन्दै रेफर गर्ने चलन बढ्दै गएको छ भने, अर्कोतिर विभिन्न परीक्षण गर्ने मेसिन बिग्रिएको भन्दै बाहिर पठाउने चलन त पुरानै हो ।
आकस्मिक कक्षको काम बिरामीलाई ‘क्वीक सर्भिस’ दिएर फ्याकल्टीमा रिफर गर्ने हो । तर चिकित्सकहरूले आफूले गर्न सक्नेसम्म गरेर नभए बाहिर पठाउने गरेका छन् । प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा ल्याब टेस्ट नै ढिलो हुने गर्दछ भने पछिल्लो समय एक्सरे, भिडियो एक्सरे बिग्रिएका छन् । जसले गर्दा पनि बिरामीहरूलाई बाहिर पठाउनुपर्ने हुन्छ । सिटी स्क्यान बिग्रिएको महिनौँ दिन भइसकेको छ । जसको मर्मत हुन नसक्दा बिरामीहरू विराटनगर पुगेर सिटी स्क्याउन गराउन बाध्य छन् ।
आकस्मिक कक्षमा उपचारमा धेरै ढिलासुस्ती हुने गरेको बिरामीका आफन्तहरू बताउँछन् । ट्राइसमा दर्ता भएपछि पनि निकै बेर डाक्टरलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ । डाक्टरले बिरामी हेरेपछि विभिन्न ल्याब टेष्ट गर्न २ घण्टा भन्दा बढी लाग्छ । विभिन्न ल्याब टेष्ट आएपछि मात्रै उपचार शुरु हुन्छ । त्यस बेला सम्म २ घण्टा भन्दा बढी समय गइसकेको हुन्छ । स्थानीय रामकुमार राई भन्छन्, ‘आकस्मीक कक्षको उपचार पाउन २ घण्टाभन्दा बढी लाग्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘त्यतिबेलासम्म त बिरामीलाई जे पनि हुन सक्छ, अनि कसरी विश्वास गर्ने ?’
प्रतिष्ठान आन्तरिक कलहका कारण लथालिङ्ग बन्दै गएको छ । त्यसमाथि कमिसनको लोभमा चिकित्सकहरूको लापरवाहीपूर्ण सेवाले प्रतिष्ठानप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानका चिकित्सक, पदाधिकारीहरूबीच एकअर्कामा अविश्वासको दूरी बढ्दै गएको छ । जसका कारण व्यवस्थापन चुस्त हुन सकेको छैन् ।
त्यसैले पनि प्रतिष्ठानमा कमिसनको चलखेल, जिम्मेवारीप्रति बेवास्ता, गुणस्तरहीन सेवा, कर्मचारीको मनपरी बढ्दै गएको एक चिकित्सक बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानमा विषाक्त माहोल बनिसकेको छ । कार्यक्षेत्रमा वैज्ञानिक कार्यविभाजन छैन । चाहिने ठाउँमा मान्छे छैनन्, नचाहिने ठाउँमा धेरै छन् । फ्याकल्टी कम देखिए पनि ओभर स्टाफिङ देखिन्छ । एउटै बिरामीमा १० जना चिकित्सक झुण्डिन्छन् तर परिणाम देखिँदैन ।’
प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्ष थप १ सय बेडसहित नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ । तर सिस्टमले चल्ने हो भने सय बेडको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘क्वीक रेस्पोन्स, क्वीक ट्रान्सफर टु कन्सर्न डिपार्टमेन्ट भयो भने २ ओटा हाउस अफिसर काफी हुन्छ ।’ बिरामीलाई लुट्नका लागि बेड थपेर, सेवालाई नै प्रभाव पार्न खोजिएको उनी बताउँछन् ।
आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि सिनियर रेसिडेन्ट र जुनियर रेसिडेन्टहरूले सेवा दिइरहेका हुन्छन् । प्रोफेसरहरूको उपस्थिति न्यून रहने गरेको आकस्मिक कक्षका एक चिकित्सक बताउँछन् । प्रोफेसरहरू कि त पेइङमा बिरामीको उपचार गरिरहेका हुन्छन् भने कि त कोठामै आराम गरिरहेका हुने उनको भनाइ छ ।
बिरामीबाट बढी दबाई ल्याउन लगाएर बाहिरका निजी क्लिनिकहरूमा पनि बेच्ने गरेको पाइएको उनको दाबी छ । प्रतिष्ठानभरि नै बिचौलियाहरू घुम्ने र उनीहरूले चिकित्सक र कर्मचारीहरूलाई कमिसन दिने गरेको उनले बताए ।
प्रतिष्ठानमा दण्डहीनता बढ्दै गएकाले प्रतिष्ठानमा समस्या बढ्दै गएको अर्का प्रोफेसरको भनाइ छ । कर्मचारी, चिकित्सकहरूमा कामप्रतिको लगाव घट्दै जानु, आफूले चाहेको ठाउँमा पुग्नका लागि चाप्लुसी गर्नुजस्ता कारणले प्रतिष्ठानमा अनियमितता बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।
निवर्तमान उपकुलपतिलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि प्रतिष्ठान पूर्ण जवाफदेहितासहितको नेतृत्वको नभएका कारण अव्यवस्थित हुँदै गएको थियो । तर, करीब २ साता अघि सरकारले कार्यवाहक उपकुलपतिलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिँदै रेक्टर प्रा.डा. गुरु खनाललाई नियुक्त गरिसकेको छ । अब भने प्रतिष्ठानमा भइरहेको कमिसनको खेल र अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै प्रतिष्ठानको अवस्था सुध्रने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् ।